Dadka u dhimanaya kuleylka dalka Pakistan oo gaaray 800 oo ruux (Sawiro) | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » Dadka u dhimanaya kuleylka dalka Pakistan oo gaaray 800 oo ruux (Sawiro)
Dadka u dhimanaya kuleylka dalka Pakistan oo gaaray 800 oo ruux (Sawiro)
Dadka u dhimanaya kuleyl daran oo ka jira koofurta dalka Pakistan ayaa gaaray 800 oo ruux, iyadoo laga cabsanayo in tirada dadka ay sare u kacaan maalmaha soo socda.
Dadkan ayaa badankood waxa ay ku nool yihiin magaalada ugu weyn dalka Pakistan ee Karachi illaa iyo Sabtidii aynu ka soo gudubnay. Dad ka badan 8,000 oo ruux ayaa la dhigay isbitaalka ugu weyn Karachi cuduro la xiriira kuleylka awgiis, 384 ka mid ah bukaanadaa ayaa u geeriyooday kuleylka awgiis.
Dadka kuleylka uu soo ridanayo ayaa badankood waxa ay yihiin dad da’adoodu u dhexeyso 45sano illaa iyo 50 sano jir. Xarumaha dowlada gobolka Sindh ayaa la shaaciyay in guud ahaan fasax ay yihiin xafiisyada dowlada iyo xarumaha waxbarashada sababo la xiriira kuleylka.
Heerkulka ayaa gaaray 43degree Celsius iyadoo huur badana uu jiray magaalada Karachi maalmihii la soo dhaafay, hase ahaatee gobolada Sukkur,Jacobabad iyo Larkana ay gaarayeen 45C, 44C iyo 43C.Kuleylkan ka jira dalka Pakistan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli lagu jiro bisha Ramadan iyadoo dadka ay badankood sooman yihiin.
Kuleylka ayaa waxa ugaga sii daray dadka reer Karachi iyadoo korontada ay tahay mid go’goayso oo mararka qaarkood saacado badan ay dadku koronto la’aan yihiin.
« Dowladda oo 25 sano kadib la soo noqonaysa hogaaminta mashaariicdii Midowga Yurub ku taageeri jirtay Soomaaliya+SAWIRO
UAE ambassador survives bomb attack by Al Shabaab »